Falanqaynta shaqooyinka iyo faa'iidooyinka dalabka shaandhooyinka la dhaqi karo-Warshadaha Wararka-Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Falanqeyn ku saabsan shaqooyinka iyo faa'iidooyinka arjiga ee miirayaasha la dhaqi karo
Waqtiga: 2021-07-12 Hits: 5
Waxaa jira noocyo badan oo miirayaal ah, noocyada barnaamijyaduna way kaladuwan yihiin iyadoo kuxiran goobta. Waxaa ka mid ah miirayaasha badan, miirayaasha la dhaqi karo ayaa si aad ah caan ugu noqday, haddana qalabka noocan ah meelo badan ayaa looga baahan yahay. Haddaba maxay yihiin shaqooyinka iyo faa'iidooyinka miirayaasha la dhaqi karo? Tani waa arrinta ay adeegsadayaal badani aad uga walaacsan yihiin. Bal aan eegno.
Shaqada miiraha la dhaqi karo: Miiraha la dhaqi karo waa aalad miiraa leh marawaxadeeda. Sheybaarka dhexdiisa, adeegsiga qalabkan wuxuu yareyn karaa buuqa, wuxuu fududeyn karaa rakibida iyo dayactirka qalabka, wuxuuna si weyn u wanaajin karaa nadaafadda. Waqtigan xaadirka ah, miirayaasha la dhaqi karo ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa saqafka hawada saqafka sare ee aqoon-isweydaarsiyo nadiif ah. Faa'iidooyin badan ayaa jira si loo bixiyo hawo tayo sare leh qolalka nadiifka ah iyo microenvironments. Miirayaasha la dhaqi karo waxay leeyihiin faa'iidooyin badan. Faa'iidooyinka soo socda ayaa ah kuwa ugu cad-cad:
Ugu horreyntii, waa mid dabacsan oo fudud oo lagu beddelayo, lagu rakibo laguna dhaqaaqo. Miiraha la dhaqi karo waa mid isku dhafan oo qaabaysan, sidoo kale wuxuu leeyahay awood u gaar ah. Miiraha la dhaqi karo way fududahay in la beddelo, iyada oo aan wax xaddidaad ah laga helin aqoon isweydaarsiga nadiifka ah, waana la beddeli karaa, la dhaqaajin karaa oo la xakamayn karaa sida la doono
Marka labaad, hawo-qaadista cadaadiska xun, maxaa yeelay miiraha la dhaqi karo ayaa bixin kara cadaadis aan joogsi lahayn, adduunka ka baxsan, qolka nadiifka ahi waa cadaadis togan, sidaa darteed qaybaha ka baxsan ma gaari doonaan aagga nadiifka ah. Isticmaalka shaandhadaani waxay sidoo kale gaabin kartaa muddada dhismaha. Isticmaalka FFU wuxuu badbaadin karaa soo saarista iyo rakibidda tuubbooyinka hawada wuxuuna yareyn karaa kharashka howlgalka. isticmaal
Xaaladaha miirayaasha la dhaqi karo, in kasta oo maalgashiga bilowgu ka sarreeyo hawo-mareenka hawada, kan dambe ayaa muujin kara astaamaha keydinta tamarta iyo dayactirka-bilaashka ah.
Intaa waxaa dheer, keydinta booska, miiraha la dhaqi karo runtii waa meel aad u fara badan. Marka loo barbardhigo nidaamyada kale, waxay ku fadhidaa dherer yar oo ka mid ah sanduuqa cadaadiska joogtada ah ee hawo-qaadashada mana qabsato booska qolka nadiifka ah. Miiraha la dhaqi karo ayaa ugu habboon meelaha leh shuruudaha adag ee wasakheynta hawada, dhererkiisu wuu hooseeyaa, mana qaadanayo meel bannaan, naqshadduna waa fudeyd iyo waxtar
Guud ahaan, xawaaraha dabaysha ee shaandhada la dhaqi karo waa mid deggan oo xitaa. Qaab dhismeedka biraha awgiis, ma duugoobi doono mana sababi doono wasakhda labaad. Intaa waxaa dheer, dahaadhka codka wanaagsan iyo naqshadeynta marinka hawada ee xariifka ah waxay si weyn u yareyn karaan buuqa. Faa'iidooyin badan ayaa ku jira miirayaasha la dhaqi karo, muuqaalkiisuna waa ku habboon yahay dadku inay si fiican u isticmaalaan.
Qalabka sida caadiga ah loo isticmaalo, dayactirka caadiga ah ayaa waliba si gaar ah muhiim u ah. Guud ahaan waxaa lagula talinayaa in la nadiifiyo hal mar bishii ama laba jeer. Haddii dhibaatooyin la helo, waa lala tacaali doonaa waqtiga si looga fogaado dhibaatooyinka halista ah loona kordhiyo nolosha adeegga qalabka.
HOREHubi hababka nadiifinta iyo dayactirka iyo tillaabooyinka miiraha sanduuqa qaboojiyaha
NEXTSidee loo doortaa mashiinka saxda ah ee hepa filterka hawada, mashiinka bacda filterka jeebka?